Ihe karịrị 20% nke Clicks Home Home Clicks Sitere na Otu Njirimara | Martech Zone
Ihe karịrị 20% nke Clicks Home Page Clicks Sitere na Otu Njirimara
Tọzdee, Machị 10, 2016 Tọzdee, Machị 10, 2016 Douglas Karr
Anyị debanyere aha Hotjar ma mee ụfọdụ anwale ule na peeji nke obibi anyi. Ọ bụ ezigbo ihu ọma peeji nke nwere ọtụtụ ngalaba, ihe, yana ozi. Ebumnuche anyị abụghị ichegharị ndị mmadụ - ọ bụ iji nye ụlọ ọrụ a haziri ahazi ebe ndị ọbịa nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ha na-achọ.
Ma ha anaghị achọta ya!
Isan̄a didie idiọn̄ọ? N'ime 20% nke ntinye aka na ibe obibi anyị sitere na nke anyị nyocha mmanya. Na n'ịtụleghachi ihe fọdụrụ na peeji nke anyị, ndị ọbịa anaghị agagharị ma na-emekọrịta ọnụ na ibe anyị. Ewepu bụ na ọtụtụ ndị ọbịa na-aga ụkwụ anyị.
Anyị mejuputara Swiftype maka ọrụ nyocha anyị n'ime. Ọ na-enye a siri ike autosuggest usoro, oké akuko, na anyị nwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ anyị nwere ike ime na saịtị na ya.
N'agbanyegh i otu esi edebe saiti gi nke oma, otu esi ahazi uzo gi, ndi nleta choro ichikota omuma nke ha ma choro uzo ichota di n'ime ichota ihe m choro. Ka anyị na ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ oge niile na-arụ ọrụ, ịnwe usoro ọchụchọ siri ike na nke amamịghe bụ ihe dị mkpa. Ọ bụrụ na ị naghị eji a chọọ dị ka ọrụ ngwá ọrụ, ijide n'aka na itinye n'ọrụ nchọta ọchụchọ n'ime nyocha gị. Ka oge na-aga, ị ga-ejidekwa ụfọdụ ozi dị egwu na isiokwu ndị ọbịa gị na-achọ na ị mepụtaghị ọdịnaya maka.
Tags: pịa nyochaokpomokun'ụlọ peejinhazi peeji nke obibihotjarnchọta n'imechọọ dị ka ọrụChọọ Marketingswiftype
Kedu ihe na-efu iji nweta ihe agbachitere ndị ahịa?
Eme nke ọma ahịa si Shopping Cart bụ Brilliantly-adọrọ adọrọ
Mar 19, 2016 na 4: 50 PM
Nke ahụ bụ eziokwu. Maka mmebe ya ka mma igosi dị ka mauch mara mma maka njikọ ndị ahịa dị ka o kwere mee. Ọ bụghị mgbe niile ka ndị ahịa na-pịa maka akụkụ "ụlọ ọrụ kacha mma" nke weebụsaịtị www.